Cuba: Curadkii Fidel Castro oo qudha iska jaray Khamiistii – Kasmo Newspaper
Cuba: Curadkii Fidel Castro oo qudha iska jaray Khamiistii
Updated - February 2, 2018 8:27 pm GMT
London (Kasmo), Fidel Angel Castro Diaz-Balart oo ku magac dheeraa Fidelito wuxuu ahaa curadkii Fidel Castro, hoggaamiyihii taariikhiga ahaa ee Kacaanka Cuba, wuxuuna qudha iska jaray maalintii Khamiista, 1dii Febraayo.
Warbaahinta rasmiga ah ee Xukuumadda ayaa laga sheegay in ‘Jaalle Fidelito intii muddo ahba uu la il darnaa, dhakhtarkana ugu jiray, xanuunka qalbijabka (depression)’.
Fidelito waxaa sannadkii 1949kii iska dhalay Fidel Castro, oo 10 sano ka dib ridi doona Rejiimkii Fulgenicio Batista ee kalitaliska ahaa, iyo Mirtha Diaz-Balarat oo la dhalatay Rafael Diaz-Balart, oo xilligii Batista ahaa Guddoomiyaha Barlamaanka iyo Wasiirka arrimaha Gudaha.
Wuxuu tacliintiisa ku soo qaatay Midowgii Sofiyeeti, isaga oo noqday ‘Nuclear Physicit’, marka uu dhimanayana wuxuu ahaa la-taliyaha dhinaca Sayniska ee Golaha Xukuumadda Cuba iyo ku-xigeenka Hormuudka Kulliyadda magaca dheer ee Sayniska.
Xilligii 80meeyadii wuxuu mas’uul ka soo noqday barnaamijkii Nuklearka Cuba ee lala kaashaday Midowgii Sofiyeeti iyo Gaashaanbuurtii Bariga, waxaa kale oo loo tiriyaa aasaaskii Xaruntii u horreysay oo nuclear ah oo dalku yeesho.
Taas oo laga dhisay Jaragua, Gobolka Cienfuegos ee xeebaha koofureed ee Cuba, markii dambana iska baaba’day sannadkii 1992kii, ka dib markii meesha ay ka baxday maalgalintii Sofiyeetiga.
Qoyska hooyadiis, reer Diaz-Balart, waxay ka mid yihiin kuwa ugu magaca dheer dadka ka soo haajiray Castro, Kacaankii 1959kii ka dib, ee masaafuriska ugu nool Gobolka Florida ee dalka Maraykanka, gaar ahaan Miami.
Abtigiis Rafael waa ninkii asaasay Ururka ‘La Rosa Blanca’ ee Xukuumadda Havana ku eedeyso weerarrada dalkeeda, halka ina-abtigii Mario Diaz-Balart yahay Xildhibaanka Degmada 25aad ee Florida u matala Barlamaanka Washington.